Anisan'ny zavatra tiako indrindra ny andrakandrana, mahafinaritra ahy ny manao sakafo tsy manaraka toromarika satria matahotra ny ho diso fanantenana aho raha toa ka tsy mifanaraka amin'izay sary itako ny sakafo amboariko.
Anio aho tena nanandrana indray, mba manao ahoana raha manao mofo tsy mbola hitako tanaty fomba nahandro hafa? Sahy tsy sahy aho saingy rehefa natao ilay izy dia toa nivoaka nahafinaritra. Tsara endrika sady tsara tsiro. Nankafizin'ireo izay nanandrana koa indro zaraina aminareo anio.
-lafarinina (farine de blé): 300g
-koba katsaka (farine de maïs): 100g
-kobam-bary (farine de riz): 100g
-lalovay (levure boulangère): 1 fonosana
-siramamy 3 sotro
-sira vovony 1 tsongo
Fomba fanaovana azy:
Alaina ny ronono ka somary hafanaina kely, rehefa izay dia arotsaka ao ny lalovay ka aroana tsara mba ho levona.
Maka vilia jobo dia arotsaka ao ny lafarininy karazany 3, arotsaka ny sira sy ny siramamy dia afangaro tsara ireo. Rehefa vita fangaro dia asiana lavaka eo afovoany ka arotsaka ny atody, somary kapohina kely amin'ny sotro ary tsy avela hivoaka io lavaka io akory fa mba hampisafaka kely ilay tamenany fotsiny no tanjona.
Avy eo dia arotsaka anatin'io lavaka io ihany koa ny ronono tery ambony ilay nafangaro lalovay.
Manomboka eto dia ny tanana no hifotafota sy hamolavola mandritra ny 10mn.
Avy eo dia raisina tsikelikely ny dibera efa modamodaka ka afangaro miandalana amin'ny paty. Rehefa tapitra voafangaro tsara ny dibera rehetra dia vita.
Ny tanjona dia tsy hisy hiraikitra intsony amin'ny sisin'ny lovia fa hitambatra ho iray ny paty. Ary tsy hisy vongana tavela ny dibera rehefa mifangaro amin'ilay paty.
Rehefa nahazo paty iray mitambongana isika dia saromana amin'ny lamba ny lovia jobo ka avela hilona 2ora amin'ny toerana tsy mangatsiaka izy.
Lasa izay ny 2 ora, sokafana ny lamba, tsindronina amin'ny ratsan-tanana ny paty izay nibontsina be teo, ka volavolaina kely mba hiala ny rivotra.
Zaraina toko 6 ilay paty ka ezahina atao lavalava (toy ny kankana) @ tanana izy enina. Maka toko 3 ka io no randranina ahazoana mofo 1.
Hafanaina 180*C ny lafaoro ka andrahoina mandritra ny 20mn ny mofo.
Mba ho mandina ny mofo dia somary lalorina tamenak'atody ary raha sendra misy ao aminao dia asiana "graines de sésame" eo amboniny eo hanome endrika tsara azy.
Dia izay ary fa mahasoava daholo o
Publié par Ikala Fanja à 10:28 1 commentaire:
Aretin-damosina: AOKA IZAY ✋🏼
Aretina tena mpahazo ny olombelona ny marary lamosina, indrindra ny vehivavy bevoka, satria rehefa bevoka dia toa zary taritin'ilay kibo hiroso aty aloha izany indraindray. Fa na tsy ny vehivavy bevoka aza fa olon-tsotra dia maro dia maro ireo marary lamosina rehefa mandrosondroso ny taona.
Izaho manokana dia isan'ireo narary lamosina fony nitondra vohoka ireo zanako 2. Eny fa na dia tsy nibata zavatra mavesatra aza tamin'izany andro izany. Izaho rahateo mpiasa birao ka tsy dia nampiasa vatana firy nefa dia narary lamosina ihany.
Ankehitriny aho nahatsapa fiovana koa tsy aritra ny tsy hizara izay mahasoa aminareo e!
Mbola tsy ampy eritaona akory aho izao no nahafantatra an'ity Yoga ity, mbola tsy ampy eritaona no nianarako azy ary mbola tsy lasa lavitra ny fahaizako azy. Na izany aza anefa, ireo fihetsika mitondra fahasalamana sy manome herim-batana dia ezahiko atao foana isan'andro na dia tsy tonga lafatra aza aho. Ary indro ankehitriny, hafaliana ny mizara aminareo fa efa misy vokany ny rano natsakaina e!
Efa 8 volana izao ny vohoka entiko ary tsy mba mahatsapa an'izany marary lamosina izany intsony aho. Ary ny tena zava-dehibe? Mahatsapa ho manana hery be dia be aho. Tena matanjaka aho ka hisaorako ny Tompo nanoro ahy ity taranja Yoga ity.
Indro zaraiko aminareo ireo fihetsika (stretching) 3 anisan'ny miaro amin'ny aretin-damosina:
Rehefa manao azy ireo dia miaina miadana tsara: mifoka rivotra amin'ny orona miadana tsara, avy eo avoaka moramora, miadana dia miadana amin'ny vava ny rivotra anaty vatana. Mijanona amin'ny fihetsika iray mandritra ny 30segondra farafahakeliny. Raha mbola tsy zatra mety tsy aharitra 30segondra fa aza kivy, ampitso koa andro vaovao.
Dia mirary soa anareo rehetra.
Publié par Ikala Fanja à 10:09 3 commentaires:
Libellés : FAHASALAMANA
Ankoatry ny hafaliana hifampizarana nohon'ny fahatsiarovana ny famonjena sy fahasoavana azontsika olombelona satria nandresy ny fahafatesana ilay Tompontsika na dia noho ny fahotantsika aza; dia zary lasa fomba amampanao ihany koa ny manao fihinanam-be, indrindra fa ny fihinanana sakafo matsiro be sy ny fihinanana "chocolat" be dia be.
Samy manararaotra avokoa fa tsy isan'andro no manaram-po.
Koa rehefa vita izay ny fety dia andao hijery fahasalamana vetivety.
Mba tsy ho simba loatra ny aty, mba tsy hatavy be noho ireny menaka maro be. Dia indro zaraiko aminareo fika kely. Tsotra sy mahomby hanampy anareo ahazo tanjaka amin'ny alalan'ny vitamina. Ary koa hanampy anareo hanaisotra ny kolesterola ratsy any anaty vatana any.
- silaka voasary makirana 4 manify
- silaka sakamalao 4 manify ( efa voaofy)
- ravina solila 5 voasasa tsara
- raha misy dia ampio "framboise" kely 6 na 7 (tsy voatery)
Rehefa vonona ireo akora rehetra ireo dia atao anaty tavoahangy ary fenoina rano antsasaky ny litatra. Avela hilona farafahakeliny tapakandro. Dia vonona ny rano.
Publié par Ikala Fanja à 07:07 Aucun commentaire:
Izaho dia anisan'ireo olona tia misakafo ary mankafy manokana ny sakafo maraina. Io sakafo maraina io no tena tsy zakako indrindra eto an-tany raha toa ka ho foanana amin'ny fiainako.
Eny, tia misakafo aho ry zareo, ary afaka sokajiana ho isan'ireo tendan-kanina mihitsy aza angamba raha ampitahaina amin'ireo olona maro be izay tsy misotro afatsy rano ny maraina dia lasa miatrika ny adidy aman'andraikiny.
Saingy ho ahy, zava-dehibe amiko io fotoana io. Etsy an-daniny anefa aho dia anisan'ireo sokajin'olona mitandro ny fahasalamany ihany koa. Ka ny politikako dia mitovy amin'ireo izay manaraka ny: misakafo maraina toy ny mpanankarena, misakafo atoandro toy ny mananon-tena ary misakafo alina toy ny mahantra.
Na lzany aza anefa, mitandrina aho mba tsy hihinan-kinam-poana, ka hitondra aretina ho an'ny vatako ka mety ho lasa matavy loatra aho na ho mahia loatra. Tsy misy afatsy ny mitandrina, aleo manko misoroka hono toy izay mitsabo e!
Koa anio indray, nandramako ity tapin-tsatroka natao tamin'ny vovon-katsaka, hitako fa tena tsara sy ara-pahasalamana koa dia hafaliana ho ahy ny mizara azy aminareo. Eritreritra noforoniko izy ity koa aza omena tsiny aho raha tsy manintona anareo.
Zavatra ilaina ahavitana tapin-tsatroka 5:
- atody 1
- vovon-katsaka 2 vera
- ronono vita @ zava-maniry 1 vera (lait d'amande no nampiasaiko teto)
- lalovay 1 sotrokely
Haingony fa tsy voatery: 1- "yaourt"
Fomba fikarakarana azy:
Alaina ny atody ka kapohina mba handroatra tsara toy ireny hanao mofo rehetra ireny, arotsaka ny vovon-katsaka sy ny lalovay ary ny ronono dia tohizana kapohina indray mba tsy hisy hitambongana intsony.
Rehefa vita izay, raha tsy manana lapoaly ilay "anti-adhésive" ianao dia hosory menaka kely fotsiny ny lapoalinao dia hafanao ambony fatana. Arotsaho anaty lapoaly ny paty sahabo ho antsaka sotrobe, avela kely ho masaka dia avadika indray.
Rehefa vita avokoa dia ataovy ambony vilia, asio "yaourt" manelanelana azy mandrapahalanin'ny tapin-tsatroka.
Dia mazotoa homana ary.
Fanamarihana: tsy mila siramamy mihitsy isika satria ny vovon-katsaka dia efa somary mamy, ary ny "yaourt" dia efa mosy siramamy ihany koa. Nefa moa raha tia mamy be ianao dia asio tantely kely ilay paty alohan'ny ahandro azy mba tsy hampatavy.
Publié par Ikala Fanja à 12:07 1 commentaire: